eNasha.com - बच्चाहरु यौनमा लिप्त !
संसारमा बदमास केटाकेटीको पनि कमी छैन । अमेरिकाको लुजियाना, न्यू ओर्लिन्सस्थित एउटा स्कूलका पाँच कक्षामा पढ्ने बालबालिकाहरुले उधुम मच्चाए । एपी समाचार संस्थाका अनुसार पाँच कक्षाका ११ देखि १३ वर्षउमेरका चार जना यी स्कूले केटाकेटीहरुले कक्षा कोठाभित्रै आफ्ना गुरुबा-गुरुआमा नभएको मौका छोपी यौन क्रियाकलाप गरेका छन् । त्यो पनि अन्य छात्रछात्राहरुलाई खुला पर््रदर्शन गराउँदै ।
यो घटना एक कान दुइ कान मैदान भएपछि गएको मंगलबार तिनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र स्कूलभित्र अश्लील क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाइएको छ । यो एउटा गम्भीर अपराध भएको प्रहरीको दाबी छ ।
गएको २७ मार्चमा यो घटना भए पनि स्कूलले ती 'फटाहा' विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएको छ । प्रहरी अधिकृत बब बकलीले भने- "गएको ४४ वर्षो दौरानमा मैले यस्तो खबर न त सुनेको थिएँ, न त देखेको नै ! तर यो घटनाले त बदमासीको हद नै पार गरिदियो ।"
१५ मिनेटका लागि खाली भएको यो कक्षामा ती बदमासहरुले यो क्रियाकलाप गर्न भ्याएको स्कूलका प्रशासनिक अधिकारीले बताएका छन् । "जब कक्षामा कोही पनि शिक्षक शिक्षिका थिएनन्, तब कक्षा कोठाभित्र चार जना केटा र केटीहरुले यौनिक क्रियाकलाप शुरु गरिहाले", उनले थपे ।
यो घटनालाई पत्ता लगाउन अधिकारीहरुलाई एक दिन पूरै लाग्यो । कस्तो भयो भने, त्यही कक्षामा पढ्ने एउटा विद्यार्थीले आफूभन्दा माथ्लो कक्षाको एउटा विद्यार्थीलाई सुनायो र त्यो विद्यार्थीले शिक्षकलाई । शिक्षकले यो घटनालाई स्कूल प्रशासनलाई भनेपछि मात्र गएको बिहीबार अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।
यो घटना चारैतिर फिँजिएपछि भने स्कूलका पदाधिकारीले यसबारे थप जानकारी दिएका छैनन् ।
घटनामा लिप्त भएका विद्यार्थीहरुलाई पक्राउ गरिएपछि तिनका अभिभावकको जिम्मामा छोडिएको छ । बकलीले भने- "जुन पेनाल्टी -जरिवाना तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ तिनले जिन्दगीभर याद राख्नेछन् ।"
सेक्स मूर्ख्याइँ माया सुन्दरी बलिउड भव्यता गुगल सेलेब्रिटी विज्ञापन इन्टरनेट मुद्दा मामिला नग्नता श्रीमानश्रीमती हलिउड फट्याइँ परिस्थिति प्रविधि उपाय उदारता उदेकलाग्दो